I-EA021-Umgangatho ongenazingcingo weAlarm yekhaya (uThintelo lokuHlala kwaBadala) - $ 550 - Izisombululo ze-OMG
Le nkqubo yokubeka esweni phantsi ilumkisa umntu okhathaleleyo xa isigulana sishiya okanye sizama ukushiya ibhedi okanye igumbi labo. Iza kunye ne-sensor yer sensor eyomeleleyo etshintshiwe imiphetho kunye nomphezulu onganyangekiyo ongaphezulu kunye nezantsi kunye ne-alarm sensor yoqhakamshelwano. Isilumkiso sethu sokukhathalela abaguli abaphezulu kulula ukusifaka kwaye singashukunyiswa ukuhlangabezana neemfuno zokuhambahamba.
Akukho sandi kwigumbi! Faka i-Monitor Quiet Fall apho ufuna khona
Ukunciphisa ingxolo yeklasi - I-Quiet Fall Prevention.
I-OMG Weens-Sensing Floor Mat Mat Sensor Pad ilumkisa ngononophelo lwezinto ezenziwa ngumhlali ngokuqala ngokubeka esweni ixesha lokulinganisa xa amanyathelo abahlali epaseti yomgangatho weematriki zomgangatho. Ingxolo iya kusayina kunye ne-1-1 / 2 lbs encinci. uxinzelelo. Ingasetyenziswa ecaleni kwebhedi okanye eminyango.
Iimpawu zokukhangela ezikhethiweyo ziyi-system ejikelezayo elula yokusebenzisa iifayile ezihambayo ezingenasiphelo ezingenazintambo ezithumela iimpawu kwiyunithi. Ukuqeshisa, umgcini wongamela unamathebhu emgangathweni womgangatho wokujonga ubunzima kwisantya, onokubekwa kwisigulane sesigulane okanye emnyango wesigumbi samaziko oongikazi okufuneka sijongwe.
Ngokukhawuleza xa isigulane sinyathela kwisilinganisi sokujonga ubunzima, siyayilumkisa umnakekeli nge-pager engenakucingo. Esi sisisombululo esincinci esipheleleyo kwiindawo zokuhlala ezizimeleyo okanye nayiphi na indawo yokunakekelwa okanye ukukhathazeka kwengqondo. Ezinye zala makhasi angaphantsi ziyafumaneka ukuthenga ngaphambi kokucwangciswa kwi-pager njengoko kuyimfuneko. Amagumbi amaninzi kunye / okanye izigulane zinokugcinwa ngenyameko ngenye yee-pagers. Le nkqubo inokuphinda isebenze kunye nabagadi bamaphakathi, iifers, iifowuni, iifolo zeendlela eziphuthumayo, kunye nokunye.
Le yecandelo lethu lobuchwepheshe obunelungelo lobunikazi lobunqamle ukuwa kwesohlo lokukhusela kunye nezixhobo zokukhuseleka ezinobunini ezivumela ukuba umncedisi awazi ukuba isalathisi silahlekile okanye i-monitor ye-wireless fall is out of range. Iyakwazi ukunyuka ngaphandle kwegumbi lesigulane kwisisombululo esilukhunileyo!
Akukho zintambo phakathi kwepads kunye ne-wireless fall monitor
Intambo yeentambo zokulinda ezikhulayo zokulahla kunye neepensiti zengqondo zinceda ukunciphisa ukuxhamla kunye nokuphazamiseka. Intambo yomnxeba okhululekile ubeka phantsi komhlali. Xa umhlali evuka kwaye uxinzelelo lususwe kwi-pad, isignali engena-wire ithunyelwe kwi-alarm ye-monitor kwi-hall, iyalumkisa umnakekeli.
EA021 i-wireless Fall Monitor Ihlala ibonisa ukuba umqondiso ufunyenwe kwi-sensor pad kwaye inkqubo ikulungele ukusebenza. Ukuba isiginali sensor yaphukile okanye iphume kuluhlu, jonga iialamu kunye nokubonisa umqondiso ulahlekile.
Isebenza ngamacandelo amabini ngexesha elinye
Sebenzisa u-Quiet wireless ukuwa umgcini ngepati yecala yecala; i-pad sensor pad; umxinano wokuvalela umgangatho wesantya; ukuwa kwamatye okanye isenzi senzwa.
I-Monitor ingasebenza ngamacandelo amabini ngexesha elinye.
UQOQESHO -Umthamo oguqulweyo ngokupheleleyo.
Akukho zintambo phakathi kweepads kunye neemonitha -Cutha ingozi yokuhamba kwaye ususe iintambo ezaphukileyo okanye ezixineneyo.
Isaziso sePat Signal Lost -Izilumkisi umnakekeli ukuba uqhagamshelo phakathi kw sensor pad kunye nokubeka iliso kuyekisiwe.
Ukuseta ngokuzithandela: Umnakekeli onesitshixo unokuseta kwakhona ukubeka esweni ngelungelo elilodwa elinamalungelo obunikazi obunomtsalane, umnakekeli wokukhathalela ophawula ukuba nguTamperproof.
Akukho tshintsho olungakhuselekanga: Umkhathaleli akanakulibala ukujonga umva
Ukuhlaziya ngokuzenzekelayo xa uxinzelelo lusetyenziswe kwakhona kwi-pad.
Ukuphakanyiswa kweNdlela yokuBoniswa kweNdlela ekukhanyeni ukunika umnakekeli ukuba abone i-alamu emgama.
Ibhetri eqhutywe (i-3-AA ingafakiwe) okanye i-adapter ye-AC (AC-05).
Isaziso esisezantsi seBhettery.
Ukubeka esweni kwiSaziso sokuSebenzisa.
Umninimzi unxibelelwano lwefowuni - I-Plugs kwi-system ye-nurse ye-call.
Amathoni alamu amaninzi.
Isebenza ngombhede ongenazingcingo okanye iipads sensor pads, i-mats engenamacingo phantsi, kunye ne-infrared Motion Sensor.
Nantsi indlela abasebenza ngayo:
Izigulana zizama ukuzula ebhedini okanye kwigumbi
Iialamu zibangela inyathelo kanye lezigulana eziya mat
IAlarm iyaqhubeka nokuvakala de umntu okhathaleleyo ayicwangcise
Ingasetwa kuthi cwaka isandi kwindawo ekude
Ibekwe kwindawo ephumayo ngaphandle okanye ekungeneni ekhitshini, le alarm kunye ne-mat duo iya kulumkisa umnakekeli ukuba umguli uzama ukufikelela kwindawo engasetyenziswayo xa engahambelani. Ngobugcisa obungenacingo oku kuvumela umntu okhathalelayo inkululeko ukuba ahlengahlengise ukubekwa kwiyunithi ye-alamu, nokuba ifakwe kudonga olusondeleyo, okanye ifihlwe kufutshane netafile.
10346 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje